ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲ ဆား ထည့်လျှော်မယ်ဆိုရင် ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ •
တစ်ခါ တလေ ကိုယ်ထင်မှတ် မထားတာလေးတွေက ကိုယ့်အတွက် အများကြီး အကျိုး ပြုတတ်ပါတယ်။အခုဆို ရင်လည်း သင် လုံးဝ ထင်မှတ် မထားဘဲ အမြဲသုံး နေတဲ့ ခေါင်းလျှော် ရည်တွေကို အိမ်သုံး ဆားနဲ့ သာ တွဲသုံး လိုက်ရင် ဆံပင်အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ အလှကုန် ပစ္စည်းတစ်မျိုး ဖြစ်သွားတယ် ဆိုရင် သင် စိတ်ဝင်စား တယ်မလား ။
ဆားဆိုတာ အိမ်နောက် ဘက် မီးဖိုချောင် ဝင်လိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်း တွေ့ရနိုင် တဲ့ ပစ္စည်းမျိုးပါ ။ ။ ဒီဆားကို ခေါင်းလျှော် ရည်နဲ့ တွဲပြီး လျှော်ရင် ဘာတွေ ထူးမလဲ ဆက် လေ့ လာကြည့် ကြရနော်……
ဆားက သဘာဝဖြစ် တဲ့အတွက် ဘေးဥပါဒ် ဖြစ်မှာလည်း လုံးဝ မစိုးရိမ် ရပါဘူး။ ခေါင်း လျှော်ရည်ထဲကို ဆား စားပွဲ တင်ဇွန်း (၂)ဇွန်းစာလောက် ရောထည့် ပြီး လျှော်ပေးတာက
( ၁ ) အဆီပြန်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတယ်။
တနေ့လုံး အပြင်သွားရတာမျိုး လှုပ်လှုပ်ရှားရှား လုပ်ရတာမျိုးက ခေါင်းအဆီကို ပြန်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲ ဆားထည့် လျှော်ပေးပါက ဦးရေပြား အဆီပြန်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
လုံးဝအဆီ မပြန်တာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘဲ လိုအပ်တဲ့ အဆီပမာဏာပဲ အဆီပြန်အောင် ထိန်းညှိပေးတာပါ။ အဆီပြန်တာကို ကာကွယ်ပေးတဲ့အတွက် (၂)ရက်လောက်နဲ့ အဆီ ပြန်တဲ့ ဦးရေပြားဟာ စေးကပ်ကပ် ဖြစ်မနေတော့ပဲ (၃)ရက်လောက်နေမှ ခေါင်းလျှော်ပေးလို့ ရသွားပါတယ်။ (၁)ပတ်လောက်နဲ့ တင် သိသာတဲ့ ရလဒ်ကို သင်မြင်တွေ့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
( ၂ ) ဗောက်ထခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတယ်။
နောက်ထပ် ကောင်းကျိုးတစ်ခုက ဗောက်ထခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ တချို့မိန်း ကလေးတွေဆိုရင် ခေါင်းလျှော်ရည် ဝယ်ရင်တောင် ဗောက် ပျောက်တာကို ရွေးဝယ်ကြပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အခုတော့ ဗောက်ထလို့ စိတ်ညစ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ပိုပြီးထိရောက်ချင်ရင် အိမ်သုံးဆားထက် ပင်လယ်ဆားကို သုံးပေးပါ။ ပင်လယ်ဆားနဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်ကို ရောစပ်ပြီး ဦးရေပြားကို အသာအယာ (၁၀)မိနစ်လောက် နှိပ်နယ်ပေးပါ။ သတ်မှတ်ချိန်ပြည့်မှ ခေါင်းလျှော်လိုက်ပါ၊
( ၃ ) ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို သက်သာစေတယ်။
ခေါင်းလျှော်ရည် မကောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဦးရေပြား အားနည်းလို့ဖြစ်ဖြစ် ဆံပင်တွေ ကျွတ် တတ်ပါတယ်။ အဲ့လို ဆံပင် မကြာခဏကျွတ်နေရင် အပေါ်က နည်းအတိုင်း ဦး ခေါင်းကို (၁၀)မိနစ်လောက် နှိပ်နယ်ပေးပြီး လျှော်ကြည့်ပါ။ အရင်လို ဆံပင်မကျွတ်တော့တာကို သတိထားမိ သွားပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခုပြောဖို့ ကျန်သေးတာက ဆားနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဆားက အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်လိုဆားမျိုးကို ဘာအတွက်သုံးလဲ … ? စားပွဲတင်ဆား အိမ်သုံးဆားက ဆံ ပင်ကျွတ်ခြင်းကို အထူးသက်သာစေတယ်။ သဘာဝဆား မသန့်စင်ရသေးပဲ သဘာဝအတိုင်း ရရှိလာတဲ့ ဆားက ဦးရေပြားပြဿနာတွေကို ကာကွယ်ပေးတယ်။ ဆံပင်အတွက် လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေ ဖြည့်ပေးတယ်။
ဆားခါးကတော့ စိမ်နိုင်ရင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပါ ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဆားခါးက ဆံပင်အဆီပြန် တာကို သက်သာစေသလို ဆံပင်ပျော့ဆေးနဲ့ ရောစပ်သုံးရင် ဆံပင်လည်း အုံထူစေတယ်။ ခေါင်းလျှော်ပြီး မိနစ် (၂၀)လောက်နေမှ ရေနဲ့ သန့်စင်ပေးလိုက်ပါ။
ကဲ အပေါ်က ပြောခဲ့တာလေးတွေကို တကယ်လက်တွေ့စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ဆံပင်နဲ့ ဗောက်ပြသာနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါစေနော်……
တဈခါ တလေ ကိုယျထငျမှတျ မထားတာလေးတှကေ ကိုယျ့အတှကျ အမြားကွီး အကြိုး ပွုတတျပါတယျ။အခုဆို ရငျလညျး သငျ လုံးဝ ထငျမှတျ မထားဘဲ အမွဲသုံး နတေဲ့ ခေါငျးလြှျော ရညျတှကေို အိမျသုံး ဆားနဲ့ သာ တှဲသုံး လိုကျရငျ ဆံပငျအတှကျ အသုံးဝငျတဲ့ အလှကုနျ ပစ်စညျးတဈမြိုး ဖွဈသှားတယျ ဆိုရငျ သငျ စိတျဝငျစား တယျမလား ။
ဆားဆိုတာ အိမျနောကျ ဘကျ မီးဖိုခြောငျ ဝငျလိုကျတာနဲ့ ခကျြခငျြး တှရေ့နိုငျ တဲ့ ပစ်စညျးမြိုးပါ ။ ။ ဒီဆားကို ခေါငျးလြှျော ရညျနဲ့ တှဲပွီး လြှျောရငျ ဘာတှေ ထူးမလဲ ဆကျ လေ့ လာကွညျ့ ကွရနျော……
ဆားက သဘာဝဖွဈ တဲ့အတှကျ ဘေးဥပါဒျ ဖွဈမှာလညျး လုံးဝ မစိုးရိမျ ရပါဘူး။ ခေါငျး လြှျောရညျထဲကို ဆား စားပှဲ တငျဇှနျး (၂)ဇှနျးစာလောကျ ရောထညျ့ ပွီး လြှျောပေးတာက
( ၁ ) အဆီပွနျခွငျးကို ကာကှယျပေးတယျ။
တနလေုံ့း အပွငျသှားရတာမြိုး လှုပျလှုပျရှားရှား လုပျရတာမြိုးက ခေါငျးအဆီကို ပွနျစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ခေါငျးလြှျောရညျထဲ ဆားထညျ့ လြှျောပေးပါက ဦးရပွေား အဆီပွနျခွငျးကို ကာကှယျပေးပါတယျ။
လုံးဝအဆီ မပွနျတာမြိုးတော့ မဟုတျဘဲ လိုအပျတဲ့ အဆီပမာဏာပဲ အဆီပွနျအောငျ ထိနျးညှိပေးတာပါ။ အဆီပွနျတာကို ကာကှယျပေးတဲ့အတှကျ (၂)ရကျလောကျနဲ့ အဆီ ပွနျတဲ့ ဦးရပွေားဟာ စေးကပျကပျ ဖွဈမနတေော့ပဲ (၃)ရကျလောကျနမှေ ခေါငျးလြှျောပေးလို့ ရသှားပါတယျ။ (၁)ပတျလောကျနဲ့ တငျ သိသာတဲ့ ရလဒျကို သငျမွငျတှရေ့မှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
( ၂ ) ဗောကျထခွငျးကို ကာကှယျပေးတယျ။
နောကျထပျ ကောငျးကြိုးတဈခုက ဗောကျထခွငျးကို ကာကှယျပေးပါတယျ။ တခြို့မိနျး ကလေးတှဆေိုရငျ ခေါငျးလြှျောရညျ ဝယျရငျတောငျ ဗောကျ ပြောကျတာကို ရှေးဝယျကွပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ အခုတော့ ဗောကျထလို့ စိတျညဈစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ပိုပွီးထိရောကျခငျြရငျ အိမျသုံးဆားထကျ ပငျလယျဆားကို သုံးပေးပါ။ ပငျလယျဆားနဲ့ ခေါငျးလြှျောရညျကို ရောစပျပွီး ဦးရပွေားကို အသာအယာ (၁၀)မိနဈလောကျ နှိပျနယျပေးပါ။ သတျမှတျခြိနျပွညျ့မှ ခေါငျးလြှျောလိုကျပါ၊
( ၃ ) ဆံပငျကြှတျခွငျးကို သကျသာစတေယျ။
ခေါငျးလြှျောရညျ မကောငျးလို့ပဲဖွဈဖွဈ၊ ဦးရပွေား အားနညျးလို့ဖွဈဖွဈ ဆံပငျတှေ ကြှတျ တတျပါတယျ။ အဲ့လို ဆံပငျ မကွာခဏကြှတျနရေငျ အပျေါက နညျးအတိုငျး ဦး ခေါငျးကို (၁၀)မိနဈလောကျ နှိပျနယျပေးပွီး လြှျောကွညျ့ပါ။ အရငျလို ဆံပငျမကြှတျတော့တာကို သတိထားမိ သှားပါလိမျ့မယျ။
တဈခုပွောဖို့ ကနျြသေးတာက ဆားနဲ့ ပတျသကျရငျ ဆားက အမြိုးမြိုး ရှိပါတယျ။ ဒီတော့ ဘယျလိုဆားမြိုးကို ဘာအတှကျသုံးလဲ … ? စားပှဲတငျဆား အိမျသုံးဆားက ဆံ ပငျကြှတျခွငျးကို အထူးသကျသာစတေယျ။ သဘာဝဆား မသနျ့စငျရသေးပဲ သဘာဝအတိုငျး ရရှိလာတဲ့ ဆားက ဦးရပွေားပွဿနာတှကေို ကာကှယျပေးတယျ။ ဆံပငျအတှကျ လိုအပျတဲ့ဓာတျတှေ ဖွညျ့ပေးတယျ။
ဆားခါးကတော့ စိမျနိုငျရငျ ခန်ဓာကိုယျအတှကျပါ ကောငျးမှနျစပေါတယျ။ ဆားခါးက ဆံပငျအဆီပွနျ တာကို သကျသာစသေလို ဆံပငျပြော့ဆေးနဲ့ ရောစပျသုံးရငျ ဆံပငျလညျး အုံထူစတေယျ။ ခေါငျးလြှျောပွီး မိနဈ (၂၀)လောကျနမှေ ရနေဲ့ သနျ့စငျပေးလိုကျပါ။
ကဲ အပျေါက ပွောခဲ့တာလေးတှကေို တကယျလကျတှစေ့မျးသပျခွငျးဖွငျ့ ကနျြးမာသနျစှမျးတဲ့ ဆံပငျနဲ့ ဗောကျပွသာနာကို ဖွရှေငျးနိုငျပါစနေျော……
ကမ္ဘာ့ဉာဏ်အကောင်းဆုံး လူသားအဖြစ် မှတ်တမ်းအတင်ခံရသူ မြန်မာပြည်သား သာသနာ့အာဇာနည်
Total Hits : 1194229